RASMI: Manchester United oo dhameystirtay heshiiska Aaron Wan-Bissaka – Gool FM
RASMI: Manchester United oo dhameystirtay heshiiska Aaron Wan-Bissaka
Dajiye June 29, 2019
(Manchester) 29 Juunyo 2019. Manchester United ayaa si rasmi ah u dhameystirtay heshiiska xiddiga garabka midig ee Aaron Wan-Bissaka, kaasoo kaga yimid kooxda Crystal Palace.
Aaron Wan-Bissaka ayaa saxiixay heshiis 5 sano ah, wuxuuna dooq u heysataa inuu sanad kale ku dari karo.
Manchester United ayaa xiddigan kaga soo qaadatay kooxda Crystal Palace qiimo dhan 50 milyan oo ginni, waxaana uu noqonayaa daafaca garabka midig ee ugu qaalisan taariikhda kubadda cagta adduunka.
Hadaba Man United ayaa bayaan ay boggeeda rasmiga ah soo dhigtay waxay ku sheegtay:
“Manchester United waxay ku faraxsan yahay inay xaqiijiso saxiixa Aaron Wan-Bissaka ay kasoo qaateen kooxda Crystal Palace, Aaron wuxuu saxiixay heshiis 5 sanadood ah, wuxuuna dooq u heystaa in sanad kale lagu kordhiyo heshiiskiisa”.
Dhinaca kale Aaron Wan-Bissaka ayaa marka uu heshiiska saxiixay wuxuu qiray inuu dareen ahaan ku faraxsan yahay inuu yahay xiddig ka tirsan kooxda Man United, waxaana uu qiray inuusan sugi karin inta uu shaxda kooxda ka mid noqonayo.
Laacibka ayaa xusay inuu fasax yar qaadanayo kaddib marka uu ka qeyb galay koobka qaramada Yurub ee 21 jirada, laakiin waxa uu sheegay inuu indhaha ku hayo inuu tababarka la qaato xiddigaha kooxdiisa cusub iyo macalinkiisa, tababarka ay isugu diyaarinayaan xili ciyareedka cusub.
Manchester United ayaan si rasmi ah u shaacinin lambarka uu xiran doono Aaron Wan-Bissaka laakiin warbaahinta ayaa shaacisay inuu qaadan doono Lambarka 29-aad, sida lagu xaqiijiyay sawir laga soo xaday Maan United.
Yeelkadeeda, Dhameystirka saxiixa Aaron Wan-Bissaka ayaa ka dhigan inuu yahay heshiiskii labaad ay Red Devils ka sameysay suuqan xagaaga.
Chelsea oo fariin hanjabaat ah ee ku aadan Álvaro Morata u dirtay Kooxda Atletico Madrid
Arsenal oo ku fikireysa soo xero galinta ciyaaryahan hore ee kooxda Chelsea ah